သဘာဝတွင်အချိန်ဖြုန်း - သင့် ဦး နှောက်ကိုညစ်ညူးစေသည်
သုတေသနပြုချက်အရသဘာဝ၌အချိန်အတုလှုံ့ဆော်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်ကိုယ်ခန္ဓာပုံရိပ်ပြproblemsနာများကိုရေတွက်သည်။ ကြည့်ရှုရန်“ဘယ်လိုသဘာဝဖြစ်ခြင်းငါတို့အလောင်းတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်လက်တွေ့အလှတရားစံချိန်စံညွှန်းများပယ်ချစေသည်။ " ဒါဟာအစသာယာဝပြောရေးခံစားချက်များကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်။
အဲဒါကိုဘယ်လိုခေါ်ရမလဲမသိဘူး“ Earth Cuddles” သည်အခြားအရာအားလုံးကဲ့သို့ကောင်းသည်။ အခြေခံအားဖြင့်နေထွက်ချိန်မနက်တိုင်းကျွန်တော်ထွက်ပြီးတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြေးတက်ပြီးတက်၊ ထိုင်၊ နေထွက်ခြင်းကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့ကျွန်တော့်တည်ရှိမှုအတွက်ဖန်တီးမှုကိုကျေးဇူးတင်ပြီးကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကမ္ဘာမြေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့ cuddle ကဲ့သို့ခံစား, ဒါကြောင့်သင်အဲဒီမှာသွား ...
ငါ (မနက် ၆ နာရီ) စောစောထပြီး ၅ မိုင်ဝေးတဲ့နောက်ဆုံးမြို့ကိုသွားတယ်။ ငါတူးမြောင်းတလျှောက်လမ်းလျှောက်။ လမ်းလျှောက်ရင်းဖြေးဖြေးလမ်းလျှောက်တာကငါ့စိတ်ကိုစဉ်းစားဖို့အချိန်အများကြီးပေးခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ရှုခြင်းအတွက်အချိန်ဖြုန်းခြင်းသည်သင်တွေးတောဆင်ခြင်ရန်နှင့်သင့်ကိုယ်သင်သိရန်ကူညီသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်လိုချင်သောအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်စိတ်ထဲဖြတ်သန်းသွားသည်။ flashback တွေကိုရှင်းလင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်ငါ့ရဲ့အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ညစ်ညမ်းစွမ်းအင်အားလုံးကိုကျွန်မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတွေ့မြင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အဲဒါကျွန်တော်ရှင်းပြနိုင်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ
ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်မှစတင်ခဲ့သည်။ အတိတ်ဖြစ်ရပ်များငါ့မှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်း-နှင့်တယ်ငါအများကြီးပိုကောင်းဆိုလို။ ကျွန်မနာမည်, စိတ်ခံစားမှုနှင့်ငါ့အတိတ်အသက်တာ၏ဖြစ်ရပ်များကိုသတိရဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ ဤသည်ညျခှနျအားဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါ 2-3 နာရီကိုယူသောငါ၏ဦးတည်ရာကို, ကိုရောက်ရှိသည့်အခါငါစာကြည့်တိုက်သို့ သွား. စာအုပ်တွေတယ်, ဒါမှမဟုတ် 1 နာရီများအတွက်အင်တာနက်ပေါ်သွား၏ (ခွင့်ပြုခဲ့အများဆုံးအချိန်) ။ ထိုအခါငါအိမ်ပြန်သွားလာ၏။ ငါ 2-3 ရက်သတ္တပတ်အဘို့ဤအမှုကိုပြု၏။
ငါသည်ငါ့အိမ်ကထွက်ခွာသည့်အခါတဦးတည်းအချိန်, ကို restart ၏ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်၏အဆုံး၌ငါကဲ့သို့သောပြင်းထန်မတရားသောခဲ့ (ငါယာယီငါ၏အအင်တာနက် access ကိုပိတ်ဆို့ခဲ့သောအတွက်) ငါတကယ်အခြားမြို့အတွက် reformat CD ကိုမဝယ်နဲ့ porn စောင့်ကြည့်ဖို့ရည်ရွယ်ကြောင်း ကြှနျတေျာ့ပြန်လာပေါ်မှာ။ ငါလမ်းလျှောက်အပေါ်စဉ်းစားရန်ဤမျှလောက်သောကြောင့်သို့သော်သည်, တဏှာစဲသွားတော့။ ဤသူသည်ငါတကယ်ရှည်လမ်းလျှောက်အကြံပြုအကြောင်းရင်းပါ!
ဒီနေ့ခေတ်မှာငါဟာလုံးဝခက်ခဲတဲ့၊ ငါအရမ်းဖွင့်ထားတယ်၊ ငါကြိုးစားခဲ့သမျှတစ်နာရီလောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမငြိမ်သက်နိုင်ဘူး။ ငါ့ကိုတစ်နေ့လုံးနီးပါးလိင်အကြောင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်။ စိတ်ကူးယဉ်ရန်မဖြစ်နိုင် ခဲ့၍ တွန်းအားသည်အလွန်ပြင်းထန်ခဲ့သည်။ ခဏအကြာမှာကျွန်တော်စိတ်ပူမိပြီးစိတ်ပူလာတယ် - ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကငါ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ထဲပြန်ဝင်သွားမှာကိုငါကြောက်တယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ငါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေရှောင်ရှားရန်လုံလောက်သောထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါထို့နောက်6နာရီကျော်သဘောသဘာဝလမ်းလျှောက်။ အဆိုပါတိုက်တွန်းသွားပြီ။ ငါညနေပိုင်းမောအားလုံးအိမ်သို့ပြန်သွား၏။
ငါ YBOP ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမပြုမီ, ငါ ED မပါဘဲကောင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ဘဝမှာအကြိမ်သာလက်တဆုပ်စာရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါအံ့သြဖွယ်အရာဖြစ်ပါတယ် ဤအကြိမ်အားလုံး ငါစခန်းချခရီးစဉ်သွားသောကာလအတွင်းသို့မဟုတ်ချက်ချင်းလာ၏။ ငါ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေမှာ rewiring ကိုအရှိန်မြှင့်တဲ့နည်းပညာနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာဝေးဝေးနေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရာရှိတယ်။ ငါခန့်မှန်းတွက်ဆချင်တယ်တောကန္တာရထဲမှာ ၁ PMO မရှိဘဲဘယ်နည်းပညာမှမှမတူဘူး။ ပုံမှန် ၃ PMO ရက်မရှိဘူး၊ အနည်းဆုံးငါ့အတွက်။
[၁၉ နှစ်] နေ့ ၆ ရက် - ငါဟာအပြင်လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်။ ငါအပြင်ဘက်မှာအချိန်တိုင်းနီးပါး piss လုပ်နေတဲ့အထိပါပဲ၊ ငါအပြင်မှာအရမ်းပျော်တာကိုကြိုက်တယ် ဘောလုံးနဲ့အပြင်မှာကြီးကြီးဆိတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းကငါ့ကိုကူညီနေတယ်။